DAAWO:Xaalada oo allow sahal ah & Ciidamada Somaliland Iyo Puntland oo qarka u saaran in ay kuwada dagaalamaan deegaanka…. – Puntlandtimes
BOSASO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno furimaha hore ee dagaalka ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda Puntland ay kusii qul qulayaan deegaanka Yubbe iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaag, kuwaas oo xiligani ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland.
Saraakiisha hogaaminaysa ciidamadani ayaa ku dhawaaqay dagaal saf balaadhan ah, waxaana hada isku muuqda ciidamada labada dhinac oo ay u dhaxayso masaafo yar.
Deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag ayaa waxaa gaadhay ilaa iyo habeenkii xalay ahayd ciidamo ku gaashaaman gaadiidka dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo kaga dhawaaqay deegaanka Yubbe in aysan u dulqaadan doonin duulaanka Somaliland.
Saraakiisha ciidamada Puntland ee gobolka Sanaag oo wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Puntland oo maanta gaadhay jiidaha hore kula hadlay furimaha dagaalka deegaanka Yubbe ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin difaacida deegaanadooda isla markaasna ay dagaal xoogan kala hor tagi doonaan ciidamada Somaliland ee duulaanka kusoo qaaday gobolka Sanaag hadii aysan ka bixin deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sanaag.
Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa haatan isku hor fadhiya deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag, waxaana laga yaabaa in xiisad dagaal ay ka dhex qaraxdo ciidamada Somaliland iyo Puntland oo kuwada sugan deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag.
Walow ay somaliland dulan taha hadana waxan arka in dagalka usan fa iido lahayn. Dagalka in laqabojiyo ila habon. Somaliland jihada tog wajala ilalin uga bahan. Mahan dad kuwwi ku xigay inad dagal ku bilow did. War jiraba cakaru iman dagaal ka hala qabojiyo. Kuwan is haya wa kuwi biri is garab san lahaa.